Ogaden News Agency (ONA) – Qabanqaabada Xaflada London ee Habeen danbe oo magaalada siweyn looga dareemayo
Qabanqaabada Xaflada London ee Habeen danbe oo magaalada siweyn looga dareemayo
Posted by ONA Admin	/ December 21, 2012
Jaaliyada Ogadeniya ee London ayaa wada qabanqaabo xoogan oo ururka dhalinyaradu kuqabanayaan Xaflad Habeen danbe ka dhici doonta West London gaar ahaan xaafada southall. Galbeedka London waxa uu barkulan u yahay inkabadan 15,000 oo kasoo jeeda dhulka Ogadeniya oo ku nool magaalada London kuwaaso maalmaha fasaxa ah soo gaadha galbeedka magaalada London. Sidoo kale waxaa xarunta weyn ee jaaliyada Ogadeniya ee London ay ku taala galbeedka magaalada London iyada oo la istaajiyay sanadkii 1996.
Xaflada habeen danbe 22/12/2012 lagu qaban doono London ayaa hadaba hadal heynteedu aad uga socota gabi ahaanba wadanka UK waxaana la filaya in Jaaliyadaha Midlanku illaa Gobolada sare ee Manchester iyo Leeds iyo Liverpool ay kasoo qeybgali doonaan xafladan.
Ururka dhalinyarada ayaa sidoo kale qabanqaabo xoogan ku jira waxaana wariyaha ONA ee magaalada London oo la kulmay Gudida qabanqaabada Xafladan loo sheegay in si daggan ay howshu u socoto. Waxaa fanaaninta iyo Dhalinyaradu ay sameeyeen diyaargarow fiican oo ay ku diyaarinayaan Bandhiga xaflada.
Bal Hoos aan ka daawano Ogeysiis ku aadan Xaflada Bari oo Sabti ah 22/12/2012 ka dhici doonta cariga Ingiriiska Magaalada London.